Guudmarka - Chengdu Zenghong Sayniska-Tech Co., Ltd
Waxaan nahay hoggaamiye warshadaha ah ee technology, hal-abuurka iyo design caadadii. Kumanaan ka mid ah macaamiisha noo dooran adduunka oo dhan. TouchDisplays la ISO9001 [2000 version] nidaamka maamulka iyo CE, FCC, ROHS, iyo caddeyn kala duwan oo caalami ah oo kale oo ka shaqeeya! Oo dhan hab socodka; horumarka [R & D], design codsiga nidaamka, wax soo saarka, tayada, wax soo saarka, saadka, qaybo sahayda iyo ka dib adeegga iibka yihiin oo dhan bixisey by TouchDisplays si ay u hubiyaan in la sii wado iyo waxqabadka shirkadaha macaamiisha oo dhan.
TouchDisplays, hoggaamiye ee technology iyo hal-abuurnimo ku dadaaleysaa in ay siin ahaanayta ugu sareeya design in la keeno xal fiicnayn in ay buuxiyaan baahida macaamiisha.
UK Branch la aasaasay.